DEG DEG: Dagaal ka socda deegaano ka tirsan Gobolka Sanaag – War La Helaa Talo La Helaa
Wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa waxaa ay sheegayaan in uu halkaasi ka socdo dagaal u dhaxeeya Ciidamo ka tirsan Soomaaliland & kuwa uu wato Col, Caare oo dhawaan ka goostay Ciidamada Soomaaliland.
Dagaalka ayaa sigaar ah waxaa uu uga socdaa deegaanada dhoob iyo biya gaduud ee bariga gobolka Sanaag oo 30km u jirta Magalada Ceerigaabo,waxana la sheegay in Ciidamada Col, Caare ay weerareen Goobo ay ku sugnaayeen Ciidamada Soomaaliland.
Wararka hordhaca ah ee haatan soo baxaya ayaa waxaa ay sheegayaan in ilaa Saddex Ruux ay ku geeriyoodeen dhaawacuna uu intaasi ka badan,kuwaas oo u badan ciidamada dagaalamay.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay Warbaahinta ka howlgasha deegaanada lagu dagaallamay u sheegeen in maalmihii ugu dambeeyay ay ka jirtay Xiisadda Labadda Ciidan.
Dhinaca kale Wararka aan heleyno ayaa waxaa ay sheegayaan in Magaalada Ceerigaabo uu ka socdo mudaharaad ay dhigayaan shacabka ku nool magaadaasi,kuwaas oo kasoo horjeeda dagaalka duleedka Magaaladaas ku dhexmaray Ciidamada Col, Caare iyo Ciidamada Soomaaliland.
SAWIRO:-Safiirka Cusub ee Ruushka u soo magacaabay Somalia oo waraaqaha laga guddoomay